Jubbaland oo shuruud ku xirtay ka qeyb galka shirka wada tashiga | KEYDMEDIA ONLINE
Jubbaland oo shuruud ku xirtay ka qeyb galka shirka wada tashiga
Maamul Goboleedka Jubbaland, ayaa walaac hor leh ka muujiyay habka uu Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, u wareejiyay hoggaanka doorashoyinka iyo amniga dalka.
KISMAAYO, Soomaaliya - Wasiirka warfaafinta Jubbaland Eng Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed, ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan go’aanka uu Farmaajo, arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka ugu wareejiyay Ra'isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxuuse sheegay in shaki weyn hareynayo, xukun wareejinta.
Wasiirku wuxuu sheegay in Farmaajo uusan si cad u wareejin owoodaha oo dhan, walina uu taagan yahay shakiga laga qabo, inuu awood u leeyahay adeegsiga ciidamada Dowladda ee isaga daacadda u ah.
Eng Cabdi Xuseen, wuxuu carrabka ku adkeeyay in Farmaajo uu kaliya amniga doorashooyinka ku warejiyay Xukuumadda, hayeeshee uu si guud u maamulo amniga dalka, taas oo ka dhigan in Ra’iisul Wasaaruhu uusan soo celin karin ciidanka ay Fahad Farmaajo geysteen gobolka Gedo, waa sida u hadaka u dhigaye.
Maamulka Goboleedka Jubbaland, wuxuu si cad u sheegay in wadada kaliya oo ay kaga qeyb gali karaan Shirka wada hadalka ay tahay in la xalliyo colaadaha aloosan, dibna loo soo celiyo nabaddii, isla markaana uu Farmaajo si buuxda u wareejiyo xukunka ciidanka.
“Haddii intaas dhici weyso kama soo qeyb galeyno, shir uu iclaamiyay Ra’iisul Wasaare Rooble, meel uusan RW awood lahayn, oo Farmaajo wali gacanta ku hayo kama soo qeyb galeynoo.” Ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Maamulka Jubbaland.
Maamullada Jubbaland iyo Puntland ayaa si adag uga soo hor jeeday Farmaajo, waxayna ka hor istaageen meel marinta u jeedooyinkiisa gaarka ah, halka ay wali muujinayaan inuu taagan yahay kala shakigii siyaasadda.